‘यौन पिशाच’का नजरमा बालिका नै किन ? #16Days - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
‘यौन पिशाच’का नजरमा बालिका नै किन ? #16Days
महिला हिंसासम्वन्धि १६ दिने अभियान हामीले १६ दिन महिला हिंसा सम्वन्धि १६ वटा स्टोरीहरू पस्कनेछौं । यसैमा यो तेस्रो स्टोरी हो । थप स्टोरीहरू यो लिंकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरसँगै जोडिएको कटहरीमा गत कात्तिक ४ गते चार वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारको जघन्य घटना भयो । घरको आँगनमा खेलिरहेकी नाबालिकामाथि अपहरण गरेर बलात्कार भयो । अझ, घटना बाहिर आउने डरले उनको हत्या गर्ने प्रयाससमेत भयो ।
बलात्कारपछि बालिकाको हत्या गर्ने उद्देश्यले ढुङ्गा प्रहार गरी मरणासन्न पारियो । घटनामा गम्भीर घाइते बालिकाको विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार जारी छ भने प्रहरीले एक महिनापछि परिवारको जाहेरीका आधारमा नातेदारसमेत रहेका २४ वर्षीय भारतीय नागरिक मुकेश सरदारलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरा अगाडि बढायो ।
अधिकारकर्मीहरूले महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलाइरहेको बेला प्रदेश राजधानी त्यसमा पनि शिक्षाको ‘हब’ मानिएको विराटनगरमा भएको यो अमानवीय र आपराधिक घटनाले दुनियाँलाई गिज्याएको छ । जति नै आन्दोलन तथा अभियान गरेर उन्नत र सचेतनायुक्त बनाउने प्रयत्नका बाबजुद समाजमा अहिले पनि बालिका बलात्कार गरी हत्या गर्ने प्रकारको कहालीलाग्दो र नृशंस घटना हुने गरेको छ । जुन सभ्य समाजमा कल्पनै गर्न सकिँदैन ।
कमजोर आँक्दा बालिकामाथि बलात्कारको घटना बढ्यो: मनोविद्
विशेष गरी बालिकाहरूलाई फकाउन सजिलो हुने प्रलोभनमा पार्न सकिने, करकाप गर्दा मान्न सक्ने, धम्क्याउन सकिने, प्रतिवाद गर्न नसक्ने भएका कारण कमजोर आँकेर बालिकालाई ‘यौन पिशाच’ आफ्नो सिकार बनाउने गरेको मनोविद् गोपाल ढकालले जानकारी दिए । त्यसबाहेक पिडोफेलियाजस्तो यौनसम्बन्धी रोगीले पनि बालिकासँग सम्पर्क राख्दा यो रोग निको हुने भन्ने भ्रमका कारण बालिका वा ‘भर्जिन’ किशोरी टार्गेट गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बालिकालाई फकाउन, बहकाउन, करकापमा पार्न सकिने भएका कारण उनीहरू बलात्कारको सिकार हुन्छन्’, ढकालले केटिएम दैनिकसँग भने, ‘त्यसबाहेक बालिकासँग सम्पर्क राख्दा आनन्द आउने, यौनसम्बन्धी रोग निको हुने भ्रम पलाउने भएका कारण पनि उनीहरूमाथि बलात्कारका घटना बढ्ने गरेको छ ।’
समाज शिक्षित हुँदै जाँदा झन् बलात्कारका घटना बढ्यो
जति जति शिक्षा र चेतनाबाट समाज प्रशिक्षित बन्दै जान्छ यस प्रकारका घटनामा कमी आउने अपेक्षा गरिन्छ । तर यहाँ त्यस विपरीतका यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् । प्रहरी कार्यालयहरूमा दायर भएका उजुरी र मुद्दाहरूको तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने पनि यस प्रकारका आपराधिक घटनामा कमी आउनुको साटो दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ ।
हनु त यौन एउटा जैविक आवश्यकता हो । जसरी मानिसलाई गाँस, बास र आवास चाहिन्छ, त्यसरी नै यौन पनि जैविक आवश्यकता हो । यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । महिला र पुरुष दुवैमा देखिन्छ । तर यौन शिक्षाको अभाव, अनुशासनहीनता, मादक पर्दाथ सेवन, लागुऔषध दुर्व्यसनी वा यौन रोग पनि बलात्कारका कारक तत्त्वहरू हुन् । बलात्कारका घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि यौन शिक्षा अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । यौन शिक्षाको अभावमा पनि बलात्कारजस्तो जघन्य घटना बढेको बताउँदै उनले त्यसमाथि पनि नवजात शिशु र नाबालिकामाथि हुने यस प्रकारको घटना अमानवीय, आपराधिक रहेको सुनाए ।
‘सबैभन्दा सुरुमा यौन शिक्षा वा सचेतनाको आवश्यकता हुन्छ, परिवारबाट विद्यालय हुँदै विश्वविद्यालयसम्म यौनसम्बन्धी शिक्षा अति आवश्यक छ’, उनले भने, ‘यौनसँग जोडिएका अपराध विश्वभर छन् । यौन मानिससँग जोडिएकै विषय हो, यौनको चाहना सबैमा हुन्छ तर सही सदुपयोग र सही परिपूर्ति गर्न नजान्दा बलात्कार हुने हो । यौन आचरणमा बस्ने सके, नैतिक अनुशासनमा बस्न सकेमा बलात्कारका घटना घट्ने निश्चित छ ।’
मान्छेमा बलात्कार गर्दा यौन सन्तुष्टि पूरा हुने भ्रम रहेको भए पनि आफू बराबरको उमेरका वा दुई जनाबिचको सहमतिमा नै गर्न सकेको खण्डमा मात्र सन्तुष्टि हुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘बलात्कार हुनुमा मानसिक रोग पनि जोडिन्छ । कोही सेक्स एडिक्सनमा परेका हुन्छन्, ती व्यक्ति यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न हुन्छन् ।’
किशोर–किशोरीले पोर्न साइट चिहाउँदा अपराध बढ्छ
करिब तीन वर्षअगाडि नेपाल सरकारले पोर्न साइट बन्द गरेको थियो । बलात्कारका घटना बढेको बताउँदै तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पोर्नसाइट बन्द गराएका थिए । सरकारको नीतिझैँ वयस्क उमेरका व्यक्तिले पोर्नसाइट हेरेर आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेमा वा उत्तेजित अवस्थामा सम्पर्क नगरी अन्य विकल्प प्रयोगमा ल्याएमा घटना नहुन सक्छ तर किशोर उमेरकाले पोर्नसाइट हेर्दा भने अपराध बढ्ने देखिएको मनोविद् ढकालले सुनाए ।
एडल्ट भिडि‌ओहरू राख्ने वेवसाइट पोर्नहव । नेपालमा यो वेवसाइट बन्द गरिएतापनि भिपिएन प्रयोग गरेर हेर्नेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ ।
उनले एउटा घटना सुनाउँदै भने, ‘केही समयअगाडि एउटा किशोरले आफ्नै बहिनी करणी गरेको घटना बाहिरिएको थियो । जसमा प्रहरीले आरोपितलाई सोध्दा उसले पोर्नसाइट हेरेर त्यस्तै गर्न खोजेको सुनाएका थिए । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने किशोर उमेरमा पोर्नसाइट हेर्दा उत्तेजित अवस्थामा अपराध हुने देखिएको छ । ’
कानुन फितलो हुँदा बलात्कारका घटना बढ्यो
हाम्रो मुलुकमा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिन नपाइने कानुन छ । संविधानले नै मृत्युदण्डलाई वर्जित गरेको छ । जतिसुकै जघन्य अपराध गरे पनि, जस्तासुकै नृशंस घटना गराए पनि र त्यस्ता घटनाबाट जतिसुकै व्यक्तिको हत्या गरे पनि अपराध गर्नेको बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने तर, निरपराध, अवोधहरुले मृत्युवरण गर्नुपर्ने असमान कानुनी व्यवस्था छ । नागरिक समाज र महिला अधिकारकर्मीहरूले बेला बेलामा यस प्रकारका जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । तर त्यसप्रति सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरू गम्भीर देखिएका छैनन् ।
समाजमा पटक पटक यस प्रकारका घटना भएका छन् । अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई काराबासको सजाय पनि भएका छन् । तर त्यसबाट मानिसहरू सचेत भएको, डराएको पाइँदैन । त्यस कारण पनि बलात्कार त्यसमा पनि नाबालक र शिशु बलात्कार गर्ने कार्यलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिँदै दुनियाँले अनुभूति गर्ने गरी कडा सजाय गर्नु जायज नै हुन्छ ।
यस प्रकारको जघन्य अपराध न्यूनीकरण गर्न संसारका प्रजातान्त्रिक मानिएका अमेरिका, भारतलगायतका मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको मृत्युदण्डलाई अपनाइएको छ । अभियन्ताहरूले उठाउँदै आएको मृत्युदण्डको विषयमा पनि अब खुला छलफल गर्नुपर्छ र कानुन बलियो बनाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।
‘मृत्युदण्ड नै उपयुक्त विकल्प नहोला तर सरकारले यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ’, उनले भने ।